Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Mpilalao kintana amin'ny Sarimihetsika fizahantany vaovao ho an'ny renivohitra UAE
John Cena dia niara-niasa tamin'ny Departemantan'ny Kolontsaina sy ny Fizahantany Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) tamin'ny fampielezan-kevitry ny fizahantany vaovao, mandrisika ireo mpandeha hamaky fitsangatsanganana ho any an-drenivohitra – “stat.”
Taorinan'ny horonantsary teaser natomboka tamin'ny herinandro lasa teo, nahita an'i Cena nandao ny drafi-dia nataony taorian'ny namakiany momba an'i Abu Dhabi teny amin'ny sidina - nanasongadina tsara ny antony hitsidihan'ny Time izao. Mitsambikina ara-bakiteny amin'ny zavatra rehetra atolotry ny toerana haleha, nitsambikina avy tao anaty fiaramanidina i Cena ary nipetraka teo amin'ny tafon'ny Louvre Abu Dhabi malaza. Mampiseho ny fijerin'ny vorona ny dian'ny Cena mamakivaky ny endrika mahafinaritra an'i Abu Dhabi, ny manintona olona manerantany ary ny fialamboly malaza.
Fialofana amin'ny tara-masoandro mandavantaona ary toerana tonga lafatra ho an'ny masoandro amin'ny ririnina, Abu Dhabi dia manolotra tontolo iray amin'ny toerana iray - mety tsara ho an'ny mpandeha izay mikasa ny hampita ny filan-dratsiny sy hamorona fahatsiarovana vaovao. Manomboka amin'ny fandosirana dune any an'efitra ka hatramin'ny fialan-tsasatra eny amin'ny tora-pasika madio misy azy, maka ny sehatry ny zavakanto sy kolontsaina mavitrika sy amin'izao fotoana izao, na mikaroka karazana fialam-boly mahafinaritra sy zaridainam-pianakaviana - misy izao tontolo izao mety ho hita mandritra ny dia mankany Abu Dhabi .
Navoaka ny horonantsary taorian'ny fanambaràna fa miarahaba ireo mpitsangatsangana vita vaksiny iraisam-pirenena sy ireo mandeha avy any amin'ny firenena Green List miverina any Emirà, i Abu Dhabi, fa tsy mila hatokana karamaina.